Iinkonzo zeWebhu zeSemalt
Ukuba ukhangele i-SEO efanelekileyo kunye nenkampani yohlalutyo, ufike kwindawo efanelekileyo. Ngabasebenzisi abangaphezu kwe-636,471 kunye ne-1,472,583 ehlaziyiweyo kwiiwebhusayithi, Semalt abathengi abanelisekileyo ngohlolo lokubonisa. Kodwa kubafundi bethu abasayiqondi intsingiselo ye-SEO kunye nohlalutyo lwewebhu, kuya kufuneka unamathele ngeenxa zonke.
Wamkelekile ku-Semalt, i-SEO ekhokelayo kunye newebhusayithi yohlalutyo. Asiyiyo nayiphi na inkampani ye-Mickey Mouse eqhelekileyo ejolise ekwenzeni imali yakho oyisebenzele nzima. Endaweni yoko, siyiarhente yedijithali egcwele ngokupheleleyo. Kufuneka uhlangane neqela lethu lamalungu anobuchule namava.
Amalungu eqela lethu yi-SEO kunye nomhlalutyi wengcali yeWebhu ezihlala zikulungele ukubakho kuzo zonke iimfuno zakho. Kuya kufuneka uzive ukhululekile ukudibana nabo kwaye uthethe nabo. Bangabasebenzi abanetalente, abakhutheleyo nabakhuthazayo abaneeprojekthi ezininzi ze-IT kwiphothifoliyo yabo. Kuya kufuneka udibane ne-turbo, isimboli ye-Semalt, kunye ne-office turtle pet yethu.
Ukuba usabuza ukuba yintoni kanye le siyenzayo, nantsi ingcaciso.
I-Semalt ibonelela nge-SEO kunye neenkonzo zohlalutyo lwewebhusayithi ukunceda ukuvelisa kunye nokukhokelela kubaxumi bethu. Siyaqhubeka nokuhlalutya iiwebhusayithi kwaye siqinisekisa ukuba ezo zikhokelayo ziguqulwa zabaxumi. Ke ewe, siyakunceda wenze imali ngokutsala abathengi kumashishini akho usebenzisa i-Intanethi.
Kwintengiso ye-Intanethi, abathengi abaye baxhamla ngokusebenzisa i-SEO bahlala bethetha iingxelo ezifana namatye e-SEO !!! Nasi isizathu
Ukuqonda ukubaluleka kwe-SEO kunye neWebhu Analytics
I-SEO imele ukwenziwa kweinjini yokukhangela. Le yindlela esebenzayo yokwenza umxholo wewebhu ubalwe nguGoogle. Amaxesha amaninzi, abasebenzisi bayabhengeza okanye babhale umxholo kwi-intanethi ngaphandle kokuqonda ukuba isebenza njani. Khawufane ucinge indawo yentengiso yabasebenzisi abangaphezu kweebhiliyoni ezi-4 kunye newebhusayithi engaphezulu kwebhiliyoni. Ewe ayizizo zonke iiwebhusayithi ezinikezela ngeenkonzo ezifanayo, kodwa kwakhona azikho ezizodwa. Nokuba yintoni ofuna ukuyenza, kukho enye iwebhusayithi enikezela into efanayo. Ke, ukuqinisekisa ukuba iimveliso zakho ziyavunywa, sisebenzisa ii-SEO.
Uyazi ukuba ngamanye amaxesha uya njani kuGoogle ukukhangela imveliso kunye okanye isihloko, kodwa ufumana amaphepha iimpendulo? Ndiqinisekile unayo, awudingi kuyiphendula.
Nangona kunjalo, u-Google ucwangcisa iziphumo zakho zophando ngendlela ethile. Ngoku, ayiyonto inhlanhla, sisiphumo se-SEO. Uninzi lwabantu abasebenzisa i-intanethi namhlanje bafumana impendulo kwimibuzo abayibuzayo kwiziphumo zokuqala ezintlanu ezibonisiweyo. Oku kuthetha ukuba abasebenzisi be-intanethi akunakwenzeka ukuba batyelele ezinye iziphumo ezi-5 kwiphepha lokuqala. Emva koko, cinga ngeziphumo zophando kwiphepha lesibini, okanye elesithathu. Ngaba ukhe wakhangela into kwaye kwafuneka uye kwiphepha lesithathu? Oku kubonisa ukuba kubaluleke kangakanani ekusebenziseni ii-SEOs.
Njengomnini-shishini okanye iwebhusayithi, ufuna ukuvelisa abantu abaninzi njengoko kufuneka ucofe imali engaphezulu. Ke xa iwebhusayithi yakho okanye iinkonzo zibonakalisa iziphumo ezintathu zokuqala, uyazi ukuba yinto enkulu. Yiyo loo nto usifunayo.
I-Semalt ikubeka kwindawo ephezulu yokutya, ubonwa kuqala. Ukwenza oku, sisebenzisa amagama aphambili kunye nohlalutyo olubanzi lwewebhu. Nangona amagama aphambili ingamagama omlingo we-intanethi, usadinga ukuphathwa kwewebhu ukuze abasebenzisi bacofe, ufunde, okanye ba-odole. Ezi zinto zinceda uGoogle, kunye nezinye i-injini yokukhangela zikhawuleze ukuwufumana umxholo wakho xa nawuphi na umsebenzisi ekhangela nantoni na enxulumene kakhulu nawe.
Ke, ukuba umsebenzisi ufuna indawo yokuthenga izicathulo, uGoogle ukhangela ngokukhawuleza kwiiwebhusayithi, kodwa ngaphandle kwewebhusayithi efanelekileyo, abasebenzisi abayi kukukhathaza ukuthenga kwindawo yakho.
Nalu uluhlu lweenkonzo ezibonelelwa ngu-Semalt
Olu hlobo lwe-SEO luqinisekisa iziphumo ezintle ngexesha elifutshane. Le phakheji ye-SEO ngokwenene yipakeji yendlu epheleleyo yeshishini lakho elikwi-Intanethi.
Oku kwandisa ukubonakala kwewebhusayithi yakho
Ufumana ukufikelela kwikhasi
Sibonelela ngokwakha ikhonkco
Uphando lwegama eliphambili
Ukwenza i-webhusayithi eyoyikekayo ayisiyiyo yonke into eyenziwayo ukuvelisa ukugcwala. Ukuba uswele ulwazi malunga nendlela yokusiqhubela kwisikhundla esiphezulu kuGoogle, akukho ngxaki. Ngexabiso le- $ 0.99 kuphela, uqala umkhankaso we-SEO obeka wena kwinzuzo. Kwanje ngokuqala kwinjini yokukhangela, sikunika yonke into oyifunayo ukukhuthaza iwebhusayithi yakho kwi-Intanethi. Sinikezela ngokufikelela kolu seto lweendlela ezimhlophe ze-SEO zeeprojekthi zakho. Okanye, unokuhambisa kumathengi akho amava angcono abathengi ngokubonelela ngeenkonzo ze-SEO ngokusekwe kwitekhnoloji yethu eyahlukileyo. Vumela i-SEO yexabiso elifikelelekayo ikusebenzele kwaye ibonelele ngeziphumo ezikhawulezileyo kunye nokusebenza kakuhle kwe-100.
Ngubani lo mnikelo?
I-SEO ye-Auto inokuba luncedo kwi-webmasters, kumashishini amancinci okanye ekuqaleni, iinkampani, kunye nabathengi abahamba rhoqo.
Le yeyona ndlela iphambili ye-SEO eyilelwe ukuba ishishini lakho liphumelele. Oku kukusa eqongeni likaGoogle.
Lo mbekelelo unikezela:
Injongo yalo naliphi na ishishini kufuneka ibe lelona lihle kakhulu. Khawufane ucinge inkampani yakho ivela kuluhlu lweenkampani ezinkulu zeForbes. Sukuyityeshela ingcinga; kunokwenzeka ngezinto ezintathu ezibalulekileyo zokuthengisa, inzuzo, kunye nokusebenzisana. Ezi zinto ziphambili ziphambili zizinto ozifunayo ukuze uphile kwihlabathi lishishini.
I-FullSEO iyakunceda ukudibanisa zonke izithako ezintathu, ikunike ukuqala kwentloko ukuchuma. Amaqela ethu eengcali ze-SEO ziphuhlisa kwaye zimilisele isicwangciso somntu ngamnye sokusebenza kweinjini yokukhangela kunye nokukhuthaza iwebhu ezilungiselelwe ngokukodwa iimfuno zakho zeshishini. Ngoncedo lwethu, indawo yakho ehlanganisiweyo ayizukuthatha kuphela iphepha lokuqala kodwa kwindawo ephezulu kukhangelo lwe-Google. Nanini na xa abantu bekhangela nayiphi na imveliso efana nale ubonelela ngayo, siya kubaqhuba ukuya kwindawo yakho.
Ngoobani abaxhamla kwiSemalt FullSEO?
Ngelixa iphakheji yethu ye-FullSEO yenzelwe ikakhulu iiprojekthi zeshishini kunye ne-e-commerce, iyanceda nakwabanini bamashishini okuqala kunye neenqokonqoko zewebhu kunye nabarhwebi abanqwenela ukwenza ezona webhusayithi zabo.
Siyihlalutya iiwebhusayithi zakho kwaye sizithathe ziye kwi-10 ephezulu yeGoogle ngexesha elifutshane kakhulu. Ngokusebenzisa inqanaba lamagama asisiseko eSemalt kunye nokutshekisha, uya kuhlala uhlala ukhona.
Sibonelela ngeenkonzo ezinje:
Ukujonga indawo yakho kwiwebhusayithi
Ukutyhila ukubonakala kwewebhusayithi yakho kwiwebhu
Ukujonga iwebhusayithi ekhuphisanayo
Chonga iimpazamo zenzuzo yephepha
Fumana iingxelo ezibanzi zewebhusayithi.
Ngaba uzama ukufikelela phezulu, kodwa ayisebenzi? Abaphulaphuli bakho abajongi iwebhusayithi yakho? Fumana iimpendulo kule mibuzo ngokusebenzisa i-Semalt Webt Analytics yethu yokuhlaziya iwebhusayithi kunye noviwo lwakho. Umkhangeli wethu wegama elikwi-intanethi elingumxholo wegama lewebhu ubonakalisa indawo yakho kwiwebhusayithi kwiSERPs. Emva koku, sicebisa amagama aphambili aya kutsala umdla wakho ekujolise kuwo. Khangela ukuba yintoni abantu abakhangela kakhulu kwaye ubaxelele into abayifunayo. Ngokujonga ukhuphiswano lwakho, sifumanisa ukuba iimfihlo zabo ziyimpumelelo. Emva koko, silungisa kwaye sisebenzise olu lwazi lutsha lokukhuthaza kwakho kwi-Intanethi.
Okokugqibela, sivelisa iingxelo zewebhu ezinenkcukacha kwaye sincede ukulungisa iimpazamo esiziphawulayo. Njengama-web gurus, sinceda wena kunye newebhusayithi yakho ukuba zizityebi.
Ngoobani abaxhamla kwii-Semalt Webt Analytics?
Sincoma oku kuye wonke umntu ofuna ukufumana okuninzi kwiiwebhusayithi zabo. Abaphathi beWebhu, abanini bamashishini abancinci, iinkampani, abaqalayo, kunye nabathengisi basimahla banokusebenzisa le nkonzo.
Sakha iiwebhusayithi ezimangalisayo zalo naliphi na ishishini kunye nomsebenzisi. Iziza esizenzayo zinokuba yi-HQ yedijithali kuyo yonke into ekwi-intanethi, ukusukela kwiinkampani ezikwi-Intanethi, amashishini abucala, kunye neevenkile, okanye iijenali zabadali, amagcisa, bonke abanye abasebenzisi abanemibono emangalisayo ekufuneka beyifumene kwi-intanethi. Ungaxhomekeka kwiinkonzo zethu zobungcali ukufumana unonophelo olufanele.
Ukubonakala kwewebhusayithi yakho kuthetha okuninzi malunga nemveliso yakho. Ukubonakalisa imifanekiso, imibala, kunye noyilo lwemicimbi kanye njengokunxiba kwakho kubomi bokwenyani. Iwebhusayithi enomdla inokuba sisigqibo esibonisa ukuba ngubani oza kuhlala ejonge izinto kwiiwebhusayithi zakho.
Inkqubo yethu yophuhliso lwewebhu ibonelela:
Uyilo olunomtsalane kunye nokusebenza
Ukuphunyezwa kwezisombululo zeCMS
Ukudityaniswa kwe plugin edibeneyo kunye ne API
Inkxaso kunye nokugcinwa
Ngubani oxhamlayo kwisicwangciso seSemalt web Development?
Abaphathi beWebhu, abanini bamashishini abancinci, iinkampani, abaqalayo, kunye nabathengisi abahambahambayo kufuneka baziva bekhululekile ukukujonga oku.
Thatha izinto eziqhelekileyo kwaye uzenze zingaqhelekanga. Sinika izimvo zakho, ubomi, intshukumo, ilizwi kunye nesenzo.
Siphuhlisa iingqondo zakho
Sebenzisa isigqubuthelo selizwi
Musa ukuxelela ababukeli kuphela izinto ozihambisayo, bonisa oko. Ukuze ube phambili kukhuphiswano lwakho, kuya kufuneka ucinge ngaphandle kwebhokisi. Yenza into ebaluleke kakhulu kuneyokuqwalaselwa yimbangi yakho. Ngoncedo lwethu, uya kuba neevidiyo ezisebenzisanayo ezinokubangela umdla ukuba abathengi bakho babe ngabakhoyo. Sitshele izimvo zakho kwaye usibukele siyiguqulela kwiividiyo zentengiso onokuzipapasha ukuze uguqulele abathengi bakho. Iividiyo zenza indlela enomdla yokunxibelelana neenkonzo zakho. Utsho kakhulu kwixesha elifutshane kwaye ubayeke bakhumbule uphawu lwakho njengoko babelana ngeevidiyo kunye nabahlobo babo. Ufumana ukonwabela ukuthengisa simahla ngenxa yeevidiyo ezichazayo ezisemgangathweni.
Ngenye imini, kuye kwenzeka ukuba oko kunceda ishishini lethu likwazi ukusebenzela abanye. Sikunceda ukwenza uphawu, kwaye siyaluxhasa kwiwebhu. Siyazi ukuba sonke sithanda ukwenza izinto zodwa, kodwa imisebenzi ethile ifanele ishiyelwe iingcali. Masikukhuphe iziphumo ezimangalisayo emsebenzini wethu. Ngamava eminyaka yokufumana iqhekeza lekhekhe ngaphandle kokuva ubunzima esijongene nabo ukulungisa iresiphi yethu. Siya kwenza umsebenzi kunye nokwakha isicwangciso sokuphucula iwebhusayithi kwiwebhu.
Le nto sibhekisa kuyo njengeenkonzo zedigital ezigcwele ngokupheleleyo.
Abathengi bethu bahlala bonelisekile, kwaye benza kakuhle ukusishiya sinamabali amangalisayo okuba iwebhusayithi yabo, ebikade ingenakufumaneka ndawo, ngoku ibekwe phakathi kweziza eziphambili. Ukuba unqwenela ukubona ngaphezulu, la matyala anokufumaneka apha.
I-Semalt ivuleleke kuye wonke umntu, nokuba uthetha luphi ulwimi. Abaphathi bethu baya kufumana ulwimi oluqhelekileyo kunye nawe. Emva kwayo yonke loo nto, sithetha iilwimi eziphambili njengesiNgesi, isiFrentshi, isiTaliyane, isiTurkey, nokunye okuninzi.
Siyaqonda ukuba ukuqonda ukuba iinjongo zakho zinokuvakala. Kodwa, ngoncedo lwethu, awudingi kuthwala umthwalo wedwa. Iingcali zethu zenza ukuba yonke le misebenzi inzima ibe lula. Ekugqibeleni, injongo yethu kukuqinisekisa ukuba awoneliseki kuphela kodwa kukuba iwebhusayithi yakho iphezulu.
Kutheni ungabhalisi nathi namhlanje kwaye ube yinxalenye yeqela elikhokelayo !!!